မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ယနေ့ခေတ် သင်္ကြန် နှင့်ကျမ၏ထင်မြင်ချက်..
ယနေ့ခေတ် သင်္ကြန် နှင့်ကျမ၏ထင်မြင်ချက်..
ကျမခုရက်ပိုင်း သင်္ကြန်ရဲ့အနှစ်သာရနဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို အတော်လေးစဉ်းစားဖြစ်နေတယ်.. သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ငယ်ငယ်ကတော့စာစီစာကုံးတွေ အဖွဲ့အနွဲ့တွေနဲ့ ရေးခဲ့ရဖူးတယ်.. အဲဒိတုံးက ကျမစိတ်ကူးပုံးဖော်ပြီးရေးခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးတွေ စာလေးတွေကျက်ပြီးတင်စားခဲ့ဖူးတဲ့ လှပယဉ်ကျေး အဓိပ္မါယ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အတာသင်္ကြန်ဟာ ယနေ့ခတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ.. ယနေ့ခတ်လူတွေအတွက် သင်္ကြန်ဆိုတာဘာလဲ.. သင်္ကြန်ရဲ့အဓိပ္မါယ် သင်္ကြန်ရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲ? သူတို့ဘယ်လိုနားလည်ထားကြလဲ.. ဆိုတာ ဒီနှစ် 2008 ရန်ကုန် အင်းလျားလမ်း သင်္ကြန်ရဲ့ vedio clip လေးတစ်ခု ကိုအမှတ်မထင် Youtube မှာတွေ့လိုက်ရာက တွေးမိတာပါ..
ကျမစဉ်းစားမိတယ် ကျမတို့ရဲ့အစည်ကားဆုံးပွဲတော်ကြီးကို ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ကျင်းပခွင့်ရတဲ့သူတွေဟာ အရမ်းကိုကံကောင်းတဲ့သူတွေပါ.. ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေက သင်္ကြန်ကိုဘယ်လိုနားလည်ထားကြလဲ.. သင်္ကြန်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ သူတို့ဘာတွေ စဉ်းစားကြလဲ..
စုံလို့ပါပဲ.. ကျမလဲသူတို့လေးတွေ ဘာစဉ်းစားမှန်း လိုက်မမှီလို့ တချို့အပေါင်းသင်းတွေဆီက ကြားဖူးသလောက်ပဲ ဥပမာပေးတာပါ.. ခေတ်နဲ့အညီအဝတ်အစားဝတ်တာ နားလည်ပါတယ်.. ကျမလဲဒီလောက် OUT OF DATE ဖြစ်နေတဲ့ သူမဟုတ်ပါဘူး.. လူငယ်ပီပီ ဒီလိုပွဲမျိုးလှချင်လို့ ဝတ်တာကိုလဲအပြစ်မပြောပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ ကာလံဒေသံ ရာသီဥတု အခြေအနေ နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ခေတ်အဝတ်အစားမျိုးကိုဝတ်စေချင်တယ်.. "တောင်းမှာအကွတ် လူမှာအဝတ်ဆိုသလို" လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝတ်စားပုံကလဲ အဲဒိလူရဲ့ CHARACTER, စရိုက် နဲ့ အဆင့်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်.. အဆင့်ဆိုရာမှာ ဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး စာရိတ္တလို့ပဲဆိုပါစို့.. သင်္ကြန်ဆိုတာ ရေနဲ့ကစားတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်ကူးပွဲ.. ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲမဟုတ်ဘူး... ရေစိုနေတာနဲ့တင်လူတိုင်းတူတူချည်းပဲ.. "နေညိုအက ရေစိုအလှ" လို့တောင်သီချင်းရှိသေးတာပဲ..
နောက်မဏ္ဏပ်တွေပေါ်မှာ မူးရူးနေတာ.. ယောင်္ကျားလေးက ထားပါအုံး.. (မသောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့) မိန်းကလေးတွေ မူးတာ မနက်ပိုင်းလောက်တင် မှောက်ပြီး ထမ်းထမ်းခေါ်သွားရတာ.. ဗွက်ထိုးအန်တာ.. အရမ်းကို ရုပ်ဆိုးပါတယ်.. အရင်က ကျမစိတ်နဲ့ဆို လက်မခံနိုင်ပေမဲ့ ခုတထစ်လျှော့တဲ့အနေနဲ့ ချမ်းတယ်ဘာညာ အကြောင်းပြပြီးသောက်ခဲ့ရင်တောင် အလွန်အကျွံ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်.. ဒါတောင် ချမ်းရင် ရိုးရာ ရာသီစာ သာကူတို့ ကြာဇံချက်ပူပူလေး ရှောက်သီးသုတ်စပ်စပ်လေး စားရင်လဲအချမ်းပြေပါတယ်.. သောက်ချင်ရင်သင်္ကြန်မှ မဟုတ်ဘူး အိမ်မှာလဲပုလင်းဖတ်ပြီးနေလို့ရပါတယ်.. သင်္ကြန်မုိ့လို့သောက်တာပဲဟာ.. ဆိုတဲ့ အဓိပ္မါယ်မရှိ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေက အတာသင်္ကြန်ဆိုတဲ့ အဓိပ္မါယ်ကိုညစ်ညမ်းစေပါတယ်..
နောက်တစ်ခုကတော့ လူမြင်ကွင်းမှာ မဖွယ်မရာများလုပ်ပြတာပါ.. ယောင်္ကျားပဲဖြစ်စေ မိန်းမပဲဖြစ်စေ ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမ၂ယောက်ပေါင်းဖြစ်စေ .. ဘေးလူကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့ အပြုအမူမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး.. မိန်းကလေးတွေ မြူဆွယ်တဲ့အကတွေကတာ... လူမြင်ကွင်းမှာ စုံတွဲတွေမဖွယ်မရာလုပ်တာ.. အလွန်တရာမှ ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်.. "အရှက်အကြောက်တရား" ရှိမှလူဆန်မှာပါ.. အိပ် စား ကာမ ထိုသုံးဝပဲသိတယ်ဆိုရင် "တိရိစ္ဆာန်" အဆင့်ဖြစ်သွားပါပြီ.. ဒါဆိုရင် ထိုသူတွေကို ကျမအနေနဲ့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့စာရင် အကြောင်းပြတတ်တဲ့.. အဝတ်ဝတ်သေးတယ်ဆိုတော့.. နဲနဲသာတယ်ပြောရမှာပါ.. အပေါ်က vedio clip ကမိန်းမလိုမျိုး ဝတ်ထားတဲ့ အကျီင်္တောင် မကပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ စကားပြောတတ်တာရယ် လူကဲ့သို့ခန္ဒာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကလွဲလို့ လူနဲ့တူတာသိပ်မရှိသလောက်ပါပဲ..
သင်္ကြန်က နေ့ဘက်ကြီးပါ လူတွေလဲအများကြီးရှိပါတယ်.. ပြီးတော့ မဏ္ဏပ်ပေါ်မှာပါ.. night club မဟုတ်ပါဘူး.. တချို့နိက်ကလပ်တွေမှာတောင် ဒါမျိုးလုပ်တဲ့သူမရှိပါဘူး.. အနောက်နိုင်တွေမှာတောင် ဒီလိုမျိုးအပြုအမူမျိုးကို မိန်းမကောင်းမလုပ်ပါဘူး.. night club မယ်တွေတောင် ပိုက်ဆံရမှပါ.. free ဆိုရင်လုပ်ပြမယ်မထင်ပါဘူး.. ဘေးကလူတွေကလဲ မတားတဲ့အပြင် အရူးဘုံမြှောက်လုပ်နေပါတယ်.. အဲဒိ vedio clip ကိုတွေ့ပြီး ကျမ ဇဝေဇဝါဖြစ်မိတယ် "ယဉ်ကျေးတဲ့ မြန်မာ" တဲ့လား.. ကျမမြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးကိုချစ်တဲ့ မြန်မာစစ်စစ်ပါ.. ဒါပေမဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ မြန်မာဆိုတဲ့ စကားကို doubt ဖြစ်လာပြီ.. တကယ်လဲစိတ်မကောင်းဘူး.. မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာသင်္ကြန်ကို အပြည့်အဝခံစားရပြီး အတာသင်္ကြန်တန်ဖိုးကို မသိတဲ့သူတွေ အတာသင်္ကြန်ရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်ကိုဖျက်စီးနေတဲ့ သူတွေကများနေပါတယ်.. ထိုမိန်းကလေးတွေကို မွေးထားတဲ့မိဘတွေရော သူတို့သမီး YOUTUBE ပေါ်အထိရောက်နေတာသိရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် မိဘလိုပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်ကျိုးပဲကြည့်ပြီး ပြည်သူတွေကို လမ်းမှားရောက်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ပထွေးဆိုးလိုပါပဲ.. တကယ် စာတတ်ပေတတ် အသိပညာ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့သူတွေ ယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေ စာပေပညာရှင်တွေ အနုပညာသမားကောင်းတွေကျတော့ ဖမ်းဆီးလိုက် သတ်ဖျက်လိုက်လုပ်တာကိုတော့ "ခေါ်ယူထိန်းသိန်းတယ်"ဆိုတဲ့စကားသုံးပြီး.. ခုလို ပညာဥာဏ်မရှိ တိရိစ္ဆာန်သာသာ ယဉ်ကျေးမှုဖျက်ဆီးပြီး တကယ်ခေါ်ယူထိန်းသိန်းသင့်တဲ့ သူတွေကိုတော့ "ငါ့အမဲ မလုရင်ပြီးရော" ဆိုပြီးလစ်လျူရှုထားပါတယ်.. ပိုတောင်သဘောကျရင်ကျနေမှာ.. ဒါမျိုးတွေကိုလူငယ်တွေ စိတ်ဝင်စားလေလေ သူတို့ ဘာလုပ်လဲအာရုံမထားနိုင်လေလေပါ.. နိုင်ငံရေး ယုတ်ယုတ်ယုတ်ယုတ် ဖြစ်ရင် ရုပ်ရှင်လောကက အဆင့်မရှိလုပ်ရက်တွေကို ဖြန့်ပြီးအာရုံပြောင်းအောင်လုပ်လိုက်.. ဟိုလုပ် ဒီလုပ်နဲ့ အချိန်ဆွဲလိုက်လုပ်နေတာပါ.. ဒါက ကျမထင်တဲ့အတိုင်း ဦးနှောက်သေးသေးနဲ့ စဉ်းစားပြီးရေးတာပါ.. သဘောထားကွဲနိုင်ပါတယ်..
အိမ်ခေါင်ကမိုးမလုံမှတော့ တစပ်မိတ်မိုးယိုတာကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြမလဲ.. ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး စီးပွားရေး ကျန်းမာရေး စတဲ့ အရေး ကြိုက်တဲ့အရေးတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရလဲလို့... ဘယ်လိုပဲစဉ်းစား စဉ်းစား အဖြေက ဒင်းတို့ပဲ ထွက်ပါတယ်.. ဒီတော့ ဒင်းတို့လှည့်ကွက်ထဲမှာ တိရိစ္ဆာန်သာသာဘဝနဲ့ ကြိုးဆွဲရာကနေကြပြီး မြန်မာ့ရိုးရာရဲ့ပုံရိပ်အလှကို ဖျက်ဆီးနေကြတော့မှာလား? ကျမ မတွေးတတ်တော့ဘူး.. လူများစုကဒီလိုဖြစ်နေတော့ ကျမတတ်နိုင်သလောက်ပဲ ကလောင်သွားနဲ့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်..
(ဤပိုစ့်သည် ကျမရဲ့ စဉ်းစားချက် ခံယူချက်ဖြစ်ပြီး မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုခြင်းမရှိပါသောကြောင့် လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲနိုင်သည်)
Posted by mabaydar at 4:06 PM
လူဆိုတာ မကောင်းမှုမှာ မွေ့လျှော်တယ်ဆိုတဲ့
အောက်တန်းစားအတွေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးပြီး ကျောက်ခေတ်ပြန်သွားနေတဲ့
ကလေကချေ လူကြီးမင်းများ ဒါတွေကိုတော့ လွှတ်ထားသတဲ့........
u know I live in the west but I never saw this dance in the public. It's seen like they dance in strip club.That's horrible. We should control these kind of people.
5/04/2008 7:01 AM